Madaxweyne Farmaajo oo ka qeybgalaya Shir madaxeedka dalalka Carabta | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeybgalaya Shir madaxeedka dalalka Carabta
NAIROBI – Madaxweynaha Federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinta berito ah lagu wadaa in uu u ambabaxo dalka Jordan halkaasoo uu ka furmayo shir madaxeedka dalalka Jaamacadda carabta.
Saraakiil ka tirsan Madaxtooyada ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu saacadihii u dambeeyey goostay in uu ka qeybgalo shirkaas,iyadoona warar kale sheegayeen in uu ka baaqanayo,sababo ku aadan kalsooni u raadinta Xukuumadda taasoo maalinta Arbacada lagu wado in horgeeyo Baarlamaanka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa shirkan uu u noqonayaa kii 2aad oo muddo todobaad gudihiisa uu ka qeybgalo iyadoona 25-kii bishan uu magaalada Nairobi kaga qeybgalay shir madaxeedkii Urur goboleedka IGAD.
Shir madaxeedka Jaamacadda Carabta oo ah kid 28aad ayaa waxa ka qeybgalaya 16-madaxweyne iyo boqoro iyadoona uu si rasmi ah u furmi doono maalinta arbacada ah ee taariikhdu ku beegan tahay 29-ka bishan Maarso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa madaxda dalalka carabta uga warbixin doona xaaldihii u dambeeyey ee Soomaaliya,abaaraha ba’an ee dadka iyo duunyada saameeyey,iyadoona la filayo in taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uu uga helo dowladiisa.